आफ्नै कार, नेपालगञ्ज र पोखरामा घर, ३३ बर्षकी युवती यति भएपछि केटालाई के चाहिन्थ्यो ! – Dainik Sangalo
October 18, 2020 7694
नेपालगञ्ज । सानु दहितको नाममा फेसबुक आइडी, प्रोफाइलमा सुन्दर फोटो । फेसबुकमा जोडिए नवलपरासीका युवा । च्याटमा गफ शुरु भयो । फोनमा पनि निरन्तर कुरा हुन थाल्यो । केटाले भिडियो कल गरौं भन्दा केटी मानिरहेकी थिइनन् । किनकी, उनी फेसबुकको प्रोफाइलमा राखेको फोटोजस्तो सुन्दर थिएनन् ।
फोनमा भेट्ने कुरा भयो । केटीले पोखरामा पनि आफ्नो घर रहेको बताइन् । नेपालगञ्जमा व्यापार व्यवसाय गरेको फूर्ति लगाइरहिन्। केटा अझ आकर्षित हुँदै गए। भेट्ने कर गर्न थाले। केटी पनि राजी भइन् र भनिन्, ‘म आफ्नै गाडीमा पोखराको घरमा जाने तयारीमा छु। त्यही बेलामा बाटोमा भेटौला र पोखरासँगै जाम्ला ।’
फेसबुके प्रेमीसँग रोमान्स गर्ने सपना देखेका केटाले छिटो आउन कर गरिरहे। एक दिन केटी नेपालगञ्जबाट हिडेको बताइन् । उनले चन्द्रौटामा पुगेपछि पैसा, गहना, मोबाइल चोरी भएको र आफू अ’प’ह’र’णमा परेको बताइन्। प्रहरीलाई फोन गरिन्, ‘म शौचालयमा छु । चार जनाले मलाई अ’प’ह’र’ण गरेका छन् । अर्को ठाउँमा लैजाने कुरा गर्दैछन् । मलाई उद्दार गर्नु पर्यो।’
घटना भदौ २६ गतेको थियो । बाँके प्रहरी, प्रदेशका डीआइजी हुँदै कुरा हेडक्वाटरसम्म पुग्यो । जिल्ला र प्रदेशमात्रै होइन, पुरै हेडक्वाटर नै परिचालन भयो । फोनको लोकेसन हुँदा नेपालगञ्ज नै देखाइरहेको थियो । प्रहरीले भोलीपल्ट २७ गते नेपालगञ्जको फूल्टेक्रामा उनलाई भेटायो । बर्दियाबाट नेपालगञ्ज आएर बसेकी ३३ वर्षकी आशिक कुमारी चौधरीले यो सब नाटक गरेकी थिइन् ।
प्रहरीले केरकार गर्दा उनले केटाले भेट्न कर गरेपछि आफूले नाटक रचेको बताएकी छन् । बाँके प्रहरी प्रमुख एसपी ओमबहादुर रानाले आइतबार अपरान्ह पत्रकार सम्मेलन गरेर घटना बाहिर ल्याएका हुन् । प्रहरीले झुठो मुद्दा र गलत सूचना प्रवाह गरेको आरोपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
Prevअब होम आइशोलेसनमा संक्रमितको मृत्यु भए शव परिवारले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
Nextसांसदलाई दशैं भत्ता दिनु भन्दा भेन्टिलेटर किनाैं – जनार्दन शर्मा
काठमाडौमा ब्रोइलर कुखुरालाई रंग लगाउदै लोकल भनेर महंगोमा बेच्दै
हिमनदीमा बाढी आउँदा करिब डेढ सय मानिसहरू बाढीले ल,x ग्यो ,९ जनाको श’व फेला !
सर्वोच्च अदालतले को’रो’ना पि’सि’आर परी’क्षण निःशु’ल्क गर्न आदेश